Kusarudzwa kwevana nevechidiki zvinyorwa zvaDecember | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fantasy, Mabhuku, Vechidiki Mabhuku
Starts december uye mazororo ave kusvika, mapato (akagadzirwa chaizvo gore rino) uye zvipo. Ichi ndicho chimwe kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa yevadzidzi vadiki kana vadiki. Nenyaya dze vampires, matikitivha cyber kana zvimwe misoro didactic. Ngatitarisei.
1 Mumvuri weVampire - Bella Forrest
2 Iyo Scarlet Circle - César Mallorquí
3 Chando Nhema - Francesca Tassini
4 Clara neMimvuri - Andrea Fontana
5 Maitiro ekugadzira nyika iri nani? - Keilly Swift
Mumvuri wevampire - Bella Forrest
Kune vaverengi kubva pamakore makumi matanhatu.
ari vampires vanogara vari mufashoni uye zvimwe pakati pevechidiki kuyaruka. Saka pano tine nyaya iyo nyeredzi Sofia claremont, musikana uyo, pahusiku hwekuzvarwa kwake kwegumi nemanomwe ekuberekwa, ari yakabatwa mukurota asingagone kumuka. Mariri rinotakurwa Mumvuri, chitsuwa uko zuva risingapenye uye rinotonga iro Ungano yemampires ane simba kwazvo pasirese.
Ikoko Sofia anosarudzwa kuve chikamu chevakadzi ve Derek Novak, muchinda wemimvuri, iyo inokwezva sekuchiva kwake simba uye kuda kwake ropa raSofia. Iye anonzwisisa izvo, kuti ararame, chinhu chakachengeteka kwazvo chiri pedyo naDerek, uye uchafanirwa kuita zvese zvinobvira kuti umukunde pasina kuve nyajambwa wake.
Denderedzwa dzvuku - César Mallorquí
Iri zita rinotarisirwa kuenderera kwe Misodzi yaShiva, yechinyakare yechinyakare yezvinyorwa zvevechidiki zveSpanish, yaive chiitiko chekunyora uye Edebé Mubairo weVechidiki Mabhuku muna 2002. Munyori waro anoonekwa senge akanakisa uye anotengesa zvakanyanya emhando iyi uye muna 2015 akawana iyo Cervantes Chico Mubairo mukucherechedza basa rake rekunyora.
Nyeredzi Javier, kuti pazororo rake rezhizha muSantander kumba kwababamunini vake, achafanirwa kugadzirisa chakavanzika chikuru: Chakavanzika che collar yakakosha kwazvo iyo yakarasika kwemakore makumi manomwe, Misodzi yaShiva. Around iye kwakaitika kutsiva crusades, rudo rwakarambidzwa uye unosuwa kunyangarika. Uye zvakare a fantasma, uye chakavanzika chakavanzika chakavanzwa mumimvuri, asi pakanga paine zvimwe zvakawanda.
Sinou nhema - Francesca Tassini
Francesca Tassini, Milanese, yakaumbwa se Munyori wechinyorwa chemufirimu uye terevhizheni, uye muna 2019 akaburitsa bhuku rehupenyu-rakafuridzirwa. Nezita iri debuts mune zvinyorwa zvevechidiki. Uye zvinomutsa kure kwatiri kuda kuenda munyika yanhasi uko hupenyu chaihwo uye hupenyu "chaihwo" hunogarisana.
Iye protagonist ndiye Sinou nhema, asiri chero mutikitivha, asiwo a kuchinja y youtuber nevateveri vazhinji muma network. Rimwe zuva, mushure mekumuka muburi (pakona yenetiweki yakadanwa saizvozvi), akawana izvozvo haakwanise kudzokera kumuviri wake wemunhu. Yake chete yekubata nenyika ndeye kuburikidza neinternet uye zvemagetsi zvigadzirwa. Iye anotsvaga rubatsiro rwehama mbiri, Ella naKennedy Davis, kuti vaone zvakaitika kwaari.
Clara nemimvuri - Andrea Fontana
Andrea Fontana akaberekerwa muGenoa, kwaanogara nekushanda. Zviri munyori, screenwriter uye muongorori wemufirimu. Uye muenzanisi ndiClaudia Petrazzi.
Ndicho comic wakagadzika mukuwa kwe 1988. Clara nababa vake vanofamba Kubva kuNew York kuenda kuguta, kutsvaga hupenyu hutsva uye kurerutsa kurwadziwa kwekutsakatika kwamai vake. Clara anotambura nerudzi rwe epilepsia iyo inogadzira kuoma muviri uye, kana iri muchimiro ichocho, ndizvo kukwanisa kuona akateedzana emimvuri dzinotaura naye uye dzinopinda kwese kwese.
Clara haachajairane nyore nyore nemusha mutsva, kuchikoro vanogara vachimunetsa uye zvinoita sekunge haisi kuzviwana. Asi, kuburikidza hope kuratidza, Clara anokwanisa kuve chikamu cheboka re ystävät uye vese vanozvidzivirira nehushingi zvinotora kutarisana nezvipoko zvavo.
Maitiro ekugadzira nyika iri nani? - Keilly Swift
Kutanga yemakore 8.
Izvi chaizvo zvekuona nemeso iri pamusoro pekuti sei maneja manzwiro, zvekugadzira, sei kukudziridza hunyanzvi, zvehungwaru hwepamoyo, zve kuzvipira, yekushingairira, ye kodzero dzevanhu uye maitiro ekuita kuti nyika ive nzvimbo yakanaka.
Keilly anokurumidza iri mupepeti mupepeti we Kutanga Nhau, rinozivikanwa repepanhau revhiki revana rine vaverengi vanopfuura mamirioni maviri. Akashanda mumabhuku evana kweanopfuura makore makumi maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vechidiki Mabhuku » Kusarudzwa kwevana nevechidiki zvinyorwa zvaDecember
Runyorwa rwakanaka kwazvo kupfuudza iyo nguva, kunyangwe ini ndisisiri jaya ini ndinonakirwa nerudzi urwu rwemanovelisi ane mwenje wenyaya uye unogaya kwazvo wepfungwa, iwo ari kuvaraidza.